Vaovao farany Lingua volana Jona 2019 · Global Voices teny Malagasy
Zarao amin'ny mpilatsaka an-tsitrapo amin'ny tambajotranao ny antso!
Voadika ny 23 Jolay 2019 14:23 GMT
Miarahaba ny rehetra! Atolotro anareo ny mikasika ny Lingua volana Jona 2019.
Tamin'ny fitambaran'io volana io, namoaka lahatsoratra 585 isika, nahasarika mpitsidika 283.916 ary jeripejy miisa 336.946. Nahatratra 260.578 ny mpankafy ny pejy Facebook iombonana Lingua, ary mpanjohy 262.944 tao amin'ny Twitter.
Nambarantsika ny antso tamin'ny fandikana teny ny sioka RightsCon amin'ny teny Arabo, Frantsay, ary Espaniôla.
Nitombo 60% ny fifamoivoizana Lingua Tiorka noho ny fandikan-teny nataon'i Hülya Akman tamin'ny lahatsoratr'i Sanjib .
Navoaka ho an'ny Yoruba , Urdu, ary Tiorka ny fitadiavana mpilatsaka an-tsitrapo .
Arabo ar 125.017
Espaniola es 19.560
Frantsay fr 17.353
Amharic am 8.847
Arabo ar 42.470
Bangla bn 8.058
Espaniola es 7.580
Frantsay fr 5.563
Misaotra betsaka noho ny fanampiana nataonao hahatanteraka izany , tena asa goavana! Manantena izany hatrany amin'ny volana manaraka 🙂